မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဆာဗာအသစ်များအတွက် BBright သည် Matrox SMPTE ST 2110 NIC ကတ်များကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေး Server များ၏နယူး Range များအတွက် BBright selection Matrox SMPTE ST 2110 NIC Card များကို
Montreal မှာ Quebec - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Matrox®ဗီဒီယို, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေး SMPTE OEMs များအတွက် ST 2110 network interface ကို Controller ကို (NIC) card, ထို BBright များအတွက်တစ်ဦးဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူကိုကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် က Ultra HD ရုပ်သံလိုင်းများထားရှိများအတွက် Matrox-based မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုဆာဗာတစ်ခုဆန်းသစ်အကွာအဝေးစတင်နေသည် SMPTE ST 2110 Workflows ။ နောက်ဆုံးပေါ် Matrox ST 2110 25 GbE ကွန်ယက်ကိုကတ်များပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, UHD-Channel ကို, ပထမဦးဆုံး BBright အိုင်ပီ-based မီဒီယာပလက်ဖောင်းရာယဇ်, BBright အပေါ် 4.B25 ရပ်, IBC 2019 မှာ2GbE ကျော် State-Of-The-အနုပညာ, 39K ဗီဒီယိုကို I / O တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မျိုးဆက်သစ် UHD ပလေးအောက်ကို, မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်း
ဒီနေ့ရဲ့အစဉ်အဆက်-ဖြစ်ပေါ်နေသောမီဒီယာစားသုံးမှုတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင် BBright, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်အရွယ်မှာအိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းချက်၏သစ်တစ်ခုလှိုင်းထုတ်လွှတ်နေပါတယ်။ အသစ် BBright UHD-Channel ကိုမီဒီယာထုတ်လုပ်မှု server ကိုတပ်ဆင်ထားသည် Matrox DSX LE5 D25တစ် 25 GbE SMPTE မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ဆင်ရေးများအတွက် CPU ကိုအရင်းအမြစ်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ST 2110 ၏ပြီးပြည့်စုံသောဝန်လျှော့ပေးမှုကမ်းလှမ်းထားတဲ့ ST 2110 NIC card ကို။ ဒါဟာ I / O အထိနှစ်ဦး၏ 4K / 'စင်ကြယ်သော' နှင့် branded feeds တွေကို-နှင့် / သို့မဟုတ်တစ် 60 GbE link ကို အသုံးပြု. နှစ်ခု 4K တိုက်ရိုက်သွင်းအားစုနှင့်အတူ UHDp25-အပါအဝင်အဆင့်မြင့်သည်ဗီဒီယိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်အ BBright UHD-Channel ကိုဖြေရှင်းချက်ဖွ SMPTE ST 2022-7 redundancy ။ Matrox ရဲ့ built-in အတူ NMOS Device ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Discovery (-04 IS) အတွက်ထောက်ခံမှု, NMOS စက်ပစ္စည်း Connection ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (-05 IS), နှင့် JT-မိုင် TR 1001-1 ထောက်ခံချက်, BBright ရဲ့ UHD-Channel ကိုဖြေရှင်းချက်ချောမွေ့စွာအတွက် plug နှင့်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ် တွင် SMPTE ST 2110 ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။
"Matrox ST 2110 NIC ကတ်များမှာလိုက်ရှာပါကသူတို့၏မြင့်-သိပ်သည်းဆ, 24 / 7-ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်းချက်ချင်းထင်ရှားခဲ့သည်, မိမိတို့နှင့်အတူသုည-CPU ကို-အသုံးပြုမှု-ပေါင်းစပ် SMPTE ST 2110 နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအဆင့်ဆင့်-မယ်လို့လျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်-အစွန်း ST4ကြှနျတျောတို့၏ SDI-based 2110K Know-ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်လိုအပ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေး, "Laurent Appercel, စျေးကွက်ဒါရိုက်တာ BBright ကပြောသည်။ "ယခုလာမယ့်မျိုးဆက် UHD ဖြေရှင်းချက်၏သစ်တစ်ခုအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုရှေ့ဆက်-စဉ်းစားထုတ်လွှင့်အိုင်ပီ Workflows ကျော်မကြုံစဖူး 4K ပလေးအောက်နှင့်မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကယ်မနှုတ်နိုင်ဆိုလိုသည်။ "
"Matrox သဲတစ်သစ်ကိုအုတ်မြစ်တည်ဆောက်ရန် BBright နှင့် pair တစုံဟာအကောင်းဆုံး-In-class ကို ST 2110 နှင့် 4K စာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူပူးပေါင်းခံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည် SMPTE ST 2110 ဖြေရှင်းနည်းများ "အယ်လ်ဘာတို Cieri, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး, Matrox ဗီဒီယိုကပြောပါတယ်။ "UHD ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်, BBright နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာမဆို content တွေကိုယူမှ High-density ကို, ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုဆာဗာများနှင့်အတူ 4K ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုခိုင်မြဲ၏။ "
BBright UHD-Channel ကို (B39, ခန်းမ2ရပ်) နှင့် Matrox SMPTE ST 2110 NIC ကတ်များ (B15, ခန်းမ7ရပ်) စက်တင်ဘာလ 2019-13 ထံမှ IBC 17 မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မည်။
BBright ကုမ္ပဏီ 4K ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာစျေးကွက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ်အလေးပေး - က Ultra HD, HEVC, multiscreen နဲ့ content delinearization ။ BBright High-end 4K ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထည့်သွင်းသည့် & ပြန်ဖွင့်ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ (baseband သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး), ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီကုဒ်ဒါနှင့်ရည်ညွှန်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အဘို့အ QC စနစ်များအဖြစ်ထုတ်လွှင့်တန်းကရိယာအပေါ် running HEVC software ကို-based နည်းပညာများ က Ultra HD ဗီဒီယိုကဂေဟစနစ်။ BBright, ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူထုတ်လွှင့်သည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်တာဝန်ထမ်းဆောင် 4K အကြောင်းအရာရောင်းချသူ, ဗီဒီယို network operator များမှ (ဂြိုဟ်တု, ကုန်း), Telco အော်ပရေတာ (IPTV) နှင့်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကရုပ်သံလိုင်း။
Email: laurent.apper[အီးမေးလျ protected]
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Matrox M264 ဟာ့ဒ်ဝဲ codec Card များကိုမြင့်မားသော-Density 4K Workflows များအတွက် XAVC ™အတည်ပြုခြင်းရယူနိုင်သော
နောက်တစ်ခု: Matrox အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့သာလျှင်လေး-Channel ကို 4Kp60 XAVC codec Card ကိုသင်္ဘောတင်